Khabiirka Kala Duwan: Maxay SEO ku Khatarsan tahay Waa inaad ka fogaato
Inkastoo dadka intooda badani ay illoobaan go'aannadooda Sannadka Cusub,inaad illowdid go'aaminta SEO-gaaga waxay yeelan kartaa cawaaqib xun. Weli waxaa jira khaladaad aad u muhiim ah oo saameeya waxqabadkaaga SEOsi xunxun. Warka fiicani wuxuu noqonayaa mid aan dib u dhicin si loo yareeyo dadaalkaaga oo aad ka dhigto sida ugu fiican ee farsamooyinka SEO-ga ah - small business network setup project.
Maamulaha Guud ee Macaamilka ee Macaamiisha Sare ,Frank Abagnale wuxuu yiraahdaa 10 qaladaad SEO ah waxaad u baahan tahay inaad iska ilaaliso si aad uga dhigto darajadaada sare.
1. Markaad ka fekereyso in maaddooyinka aadka u wanaagsani ay bedelayaan SEO
Suuqgeynta Macluumaadka waa mid muhiim ah waxayna si wacan ugala shaqeyneysaa SEO si loo horumariyoqiimeyntaada. Si kastaba ha ahaatee, milkiilayaasha ganacsigu waxay u maleynayaan in ay bedeli karaan SEO-ga oo leh waxyaabo aad u weyn kaas oo ah dhacdo weyn. In kasta oo ay jiraanTusaalayaal badan oo wanaagsan oo leh mowqif aad u fiican oo sarreeya iyada oo aan wax isku dayin ah oo lagu higsanayo, tani badanaaba waa marka laga reebo laakiin aan qaanuunka ahayn
2. Fikradda aadka u fekereysa waxay heli doontaa isku xirnaan la'aan aan dhiseyn xiriiriye
Waxaa had iyo jeer suurtogal ah in maaddo wanaagsan ay heli doonto xiriiro la'aanwixii isku day ah ee isku xirka dhismaha. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha intooda badan, ku fashilmeen inay dhisaan xiriirka waxay keeni doonaan 90 boqolkiiba maaddadaadaqarsoodi ku ah goobtaada. Sida laga soo xigtay Xogta Sahanka Dhismaha Xirfadaha 2016-2016, istaraatijiyado isku dhafan oo wax ku ool ah waxaa ka mid ah PR, martidamareegta iyo abuurista mihiim wanaagsan oo soo jiidan karta xiriirrada.
3. Mowduucyada martida ee goobta khalad ah
Boostada martida ayaa ah hab wax ku ool ah oo lagu dhisi karo isku xirka, kordhintahogaamiyaasha iyo helitaanka sheyga. Dhibaatada kaliya ayaa ah in soo dhajinta goobta khalad ah ay dhaawici karto sumcadda boggaaga oo saameyn ku yeelan kartoqiimeynta. Si looga fogaado dhibaatooyinka noocaas ah, marwalba ha ahaato taxadar si aad u hubiso in goobta aad ku talo jirtid inaad martigaliso marti-geliso waa qadarin, ciyaartailaa aad nuugaaga soo daabacdo oo aad daabacdo waxyaabo gaar ah oo tayo sare leh.
4. Ku guuldareysiga inaad kor u qaaddo nuxurkaaga
Dadku waxay ogaan doonaan oo keliya mawduucaaga haddii aad kor u qaadeyso oo qaybisoit. Hadaad ujeeddo dhiirrigelin ah, maadadaada waxay kaliya ururin doontaa saamiyo badan oo ah saamiyo ama isku xirnaanta boggaaga. Sida laga soo xigtay daraasad la sameeyayby BuzzSumo iyo Moz, boqolkiiba 50 ee dhammaan content online ay samaysay wax ka yar 2% Facebook jeclaan ama saamiyada halka 75 boqolkiiba lahaynxiriirada dibadda. Faahfaahinta ugu macquulsan ee waxqabadkani waa mid guul daro ah..
5. Xeeladaha Spamy SEO
inkastoo ganacsiyada intooda badani ay ku filan yahiin si looga fogaado inay ku biiraan SEO-kan horexeeladaha, ganacsiyada qaar ayaa weli sameeya iyada oo la adeegsanayo farsamooyin kala duwan. Tusaalooyinka caadiga ah ee farsamooyinka spam ee dhismaha xiriirka waxaa ka mid ah bixintaee xiriirinta qoraalka ama banner ad oo ku yaala bog kale oo aan lahayn xiriir aan la socon oo soo codsanaya dib-u-eegis sheyga oo ku xiran boggaaga.
6. Abuuritaanka kooban gaaban
Waqtiga intooda badan, tirooyinka dheeraadka ah waxay udhacaan si aad u sarreeya oo waxay si fiican u bixiyaanwaayo-aragnimada isticmaalaha marka la barbar dhigo qoraallada gaaban, si kastaba ha ahaatee, ma ahan wax aan caadi ahayn ujeedada gaaban si loogu daro heer sare. Sida laga soo xigtay serpIQ, boggaga sarejagooyinka waxay u muuqdaan in ay leeyihiin waxyaabo ka badan inta la barbar dhigo bogagga darajo sareeya oo leh bogag gaaban. Halkan waxaa ku qoran xeerka guud, waa waqti dheerka fiican.
7. Maqnaanshaha xiriirrada gudaha
Xiriirintaada mawduucyada kale iyo boggaga boggaaga ayaa si ka sii fiican u siinayawaayo-aragnimo-u-isticmaal iyo sidoo kale u fiican SEO. Farsamadani waxay ka caawisaa inay si isku mid ah u qaybiso isku xirnaanta guud ahaan goobta oo ay kor u qaadaan cabbirrada ay ku jiraanaragtida bogga iyo waqtiga-goobta-goobta. Farsamooyinka wax ku oolka ah ee dhismaha isku xirnaanta gudaha waxaa ka mid ah isticmaalka qoraalka caadiga ah ee erayga ah halkii laga isticmaali lahaa kelmadaha hadalkasi loo darajeeyo, loola xiriiro waxyaabaha ku habboon iyo isku xirnaanta bogagga qoto dheer.
8. Diirada saaridda warbaahinta bulshada marka loo eego xiriirka
Inkastoo warbaahinta bulshada ay tahay qalab wax ku ool ah oo suuq-geyn ah,ma aha mid bedel ah oo lagu dhisayo isku-xirnaanta awoodda. Warbaahinta bulshada maahan wax khatar u ah SEO, laakiin miisaan culus kuma qaadinAlgorithm Google.
9. Cilmi-baarista iyo isticmaalka hadalka ee muhiimka ah
Maalmahan, cilmi-baaris wax ku ool ah ma aha oo kaliya aqoonsiga dad caan ahereyo tartan hooseeya iyo ereyo muhiim ah. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad isticmaasho erayada muhiimka ah ee ku jira mawduucaaga istaraatiijiga ah. Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad isticmaashoshuruudaha la xidhiidha iyo kala duwanaanshaha erayga muhiimka ah si looga caawiyo boggaaga sare. Wixii wax ku ool ah, cilmi-baarista muhiimka ah waa in loo isticmaalo dhegeysigaiyo darajo darajo si ay kaaga caawiso inaad horumariso content, soo buuxiso baahida macaamiisha iyo kordhinta kartidaada kartidaada.
10. Xidhiidhada cidhiidhiga ah
Xidhiidhada cidhiidhiga ah ma aha oo kaliya dhibka dadka isticmaala boggaaga, laakiin iyagasidoo kale waxay saameyn taban ku leedahay SEO-gaaga. Sababaha caadiga ah ee xiriirada jajaban waxaa ka mid ah isbeddelka qaab-dhismeedka URL, u guuray ama la tirtiray content iyodib-u-diris khaldan. Si lagaaga caawiyo in aad isdifaacdo xidhiidhada jaban oo aad si fiican wax uga qabato, tixgeli inaad isticmaashid Isticmaalidda Qaymaynta Qaymaynta Qaawan ee Kurboorka